नेकपा : नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, बैशाख २८, २०७७ मा प्रकाशित
ए झुम्री ! भिरघरेलाई फुन गरेर बोला बोला ! एकछिन राजनीति कुरो गर्नु प¥यो । मन भाँडिएर तमासै भयो वहाँ काठमाण्डौमा नेकपा भित्र के भै सक्यो होला !
‘के कुरो गर्छौ बुढा ! केही हँुदैन त्यो पार्टीमा ! अन्तिम पनि, फाइनल पनि, लाष्ट पनि जे हुनु चुनाप मै हुन्छ’ भन्दै झुम्री भिरघरेलाई फुन गर्न थाली ।
‘हेर बुढा ! अब तिम्रो पार्टी भित्र नराम्रो झगडा फैलियो ! कोरोना भन्दा डरलाग्दो भाइरसले नेकपालाई गाँजी सक्यो । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भयो ।
‘नमस्कार है काका ! क्येन बोलायौ हौ !’
ए भिरघरे आई पुगिस् । लौ मुढा तानेर बस हौ । हेर भतिज तँ त अलि बुझ्ने मान्छे । ब्याखा विश्लेषण पनि गर्न जान्दछस् । अब यो नेकपा भित्रको विवाद कसरी साम्य होला भतिज !
हौ काका, ज्योतिषीलाई सोधे जस्तो पो गरेऊ त ! पार्टी समाप्त हुने भयो भन्ने चिन्ताले पोल्न थाल्यो कि क्या हो ?
हो नि होऊ ! भतिज ! सरकार त आम्छ जान्छ, पार्टी चैं जोगाइ दिए हुन्थ्यो । पापीहर्ले त्यो पनि राख्दैनन् कि क्यो हो !
मेरो विश्लेषण अलि फरक छ । म काँग्रेसको कार्यकर्ता भए पनि यो सरकार नढलोस् भन्ने कामना गर्छु । तर, काका ! कम्युनिष्टहरु आफैं भित्रको द्वन्द्वको कारणले सकिन्छ । अब यिनार्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कि पार्टी अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्छन् । त्यो गरे भने अर्को चुनापमा सकिन्छन् पनि । अनि अर्को कुरो काका नेपालमा एकमना सरकार नफाप्ने र’छ ।
हैन भिरघरे ! ओलीले पनि कसैलाई नगन्ने त हो नि । माधव नेपाल र प्रचन्नसंग सल्लाह गरेर काम गर्दा कसैले रोक्ने थिएन । अति गरेपछि खति त हुन्छ हुन्छ।
काका ! मानौ ओलीमा केही घमण्ड होला अरे । काम गर्ने सिलसिलमा गल्ती गरे होलान । तर, अरु नेताले पहिलेदेखि नै साथ नदिएको र खेदो खनेको पनि हो नि ! अस्पतालमा बस्ता पनि नफर्किए हुन्थ्यो भने । अनि ओलीले राजिनामा दिएपछि बन्ने प्रधानमन्त्री यिनारु नै होइन र !
हामीले भोगी सकेका छौं त । आफु प्रधानमन्त्री भएका बखत यिनार्ले कुन त्यस्तो काम गरे जसलाई अहिले सम्झिएर गौरब गर्न सकियोस्।
अब भतिज ! ओलीले एउटा पद त छाड्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बनाउने र दुईजना अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाउने । त्यसो गर्दा कसो होला !
त्यसो गर्दा कसो होला ! होइन काका ! त्यो गर्दा ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन होला, त्यति हो । हुन त जनता र राष्ट्रका लागि कसैले केही गर्ने होइन पदका लागि गर्ने हो । अरु केही गर्ने होइनन् क्यारे । बरु ओलीले चीनसँग एउटा सन्धि गरेर इतिहासमा नाम लेखे । अरु त उनले पनि खै…।
कोरोनाको महामारी छ, उता लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको नेपाली भूमिमा भारतले चाइना जाने वाईरोट बनाएर नेपालीलाई गन्नै छोड्यो । लकडाउनका कारण जनता पीडामा छन् । संक्रमितको संख्या थपिदै गएको छ । चेक जाँच गर्ने किट समेत अभाव भयो भनिदै छ । यस्तो बेलामा हाम्रो नेताहरु आफैं सकिने राजनीति गर्दै छन् । अनुहार हेर्दा जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्र र जनताका लागि माखो मार्ने होइनन् । अनि भिरघरे ! यस्तो बेलामा यो के रत्यौली खेलेको?
त्यही त काका ! जनतालाई करको भारी बोकाएर, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधिलाई तलब सहित पालेर, एक आपसमा खानकै लागि झगडा गरेर राष्ट्र कहाँ पुग्छ ? जनताको हालत के हुन्छ ? काम गर्न विदेश गएका १२ लाख नेपाली युवा स्वदेश फर्किदै छन् उनीहरुको ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको योजना खै ! यस्तो बेलामा नेपालका कम्युनिष्ट त्यो पनि एउटै पार्टीका ङार्रङार्र र ङुर्रङुर्र गरेर बसेका छन् । यो भन्दा बिडम्वना अरु के हुन्छ?
अब यो कुरा छोड् भिरघरे । यिनार्को लडार्इं भनेको सैद्धान्तिक होइन, नीतिगत होइन, ओलीले हामीलाई गनेनन् भन्ने मात्र हो । अब के गरी मिलाउलान्त !
केही गर्दैनन् काका ! धेरै गरे एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा ब्यवहारमै लागू हुनुपर्छ भन्छन् । यो पार्टी कमिटी नै महाधिवेशन गराउने तदर्थ कमिटी हो । बुद्धि भए छिटो अधिवेशन गराउनपट्टि लाग्छन होइन भने झगडा गर्छन बस्छन् । केही समयमा थाक्छन, पाँच छ महिना मिले जस्तो गर्छन् अनि अर्को खेल सुरु गर्छन्ु । अनि आपसमा लडेर यदुवंशीको नियति दोहो¥याउँछन्।
हैट त्यत्रो कार्यकर्ता र जनताले मायाँ गरेको पार्टी थियो । एकै फाँकोमा सकिदिए । ‘न भूतो न भविष्यति’ पो बनाई दिए।
त्यसै बेला झुम्री आइपुगी र भनी – त्यस्तो कुरा छोड्देउ ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ कात्रो किन्न आफैं जान्छन् भने कसको के लाग्छ ? देशको चिन्ता अहिलेसम्म
कसले गरेको छ र ! मयाँले सन्सार थेग्दैन, गफले चिउरा भिज्दैन । पाटीसाटी अब जै नेपाल।
ए काकी ! यो नेकपा भित्रको विग्रह साम्य भएन भने देश र जनतालाई खासै घाटा नपुग्ला तर नेपालमा कम्युनिष्ट भन्ने चै रहदैनन् होला । हाम्रो काँग्रेसलाई त राम्रै हुन्छ।
हेर भिरघरे ! काकी जान्ने भई भन्लास् तर मलाई लागेको कुरा भन्छु । स्थानीय निकाय भ्रष्टाचार भनौ वा अनियमिततामा लिप्त छ, यसले गाउँका जनताको यो पार्टीप्रति मोह भंग भयो । यो पार्टीको आधारशीला भनेको मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग हो । त्यसलाई बोक्नै नसक्ने करको भारी बोकाई दिएर थिचे । यो वर्ग पनि यसलाई समर्थन गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा रहेन । पार्टीका सबै नेताले फटाहा, ठेकेदार, ब्यापारी, पैसावाला भन्दा अरुलाई आफ्नो ठान्न पनि सकेनन् । यो अवस्थामा हामीले भन्ने त स्थायी सरकार चलाए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । अरु त जै नेपाल !
घमराजको गजल – ”…चस्स–चस्स देश दुख्दा तिमी ठान्छौ ठीकै भयो…”